သစ်သားပရိဘောဂကိုထွင်းထုထားသည့်သစ်သားပရိဘောဂများနှင့် ပတ်သက်. သင်မည်မျှသိသနည်း။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / သစ်သားပရိဘောဂကိုထွင်းထုထားသည့်သစ်သားပရိဘောဂများနှင့် ပတ်သက်. သင်မည်မျှသိသနည်း။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-07-13 မူလ:ဆိုက်ကို
ဒီနေ့ခေတ်မှာWoodcarving သည်ကောင်းမွန်သောရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ထူးခြားသောစတိုင်များကိုအပြည့်အ0အပြည့်အ0အနေဖြင့်အပြည့်အ0အနေဖြင့်အပြည့်အ0အနေဖြင့်အပြည့်အ0အနေဖြင့်အပြည့်အ0အနေဖြင့်အဆက်အပြည့်အ0တီထွင်ရာတွင်အဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပစျေးကွက်များသို့သွားနေသည်။ထိုအခါသစ်သားပရိဘောဂကိုဘာကထွင်းထုရမလဲ။ အဲဒါကိုသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ tools တွေကိုကဲ့သို့ကဲွကွာသောWoodworking ကိရိယာများ ကဲ့သို့လျှပ်စစ်လက်ဆီ, လျှပ်စစ်ကြိတ်ခြင်းကိရိယာများ, ပါဝါ rotary ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများEDC. အဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်လုပ်မှု မှလွဲ. ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ဆိုင်ရာသစ်သားပရိဘောဂများကိုသက်ဆိုင်ရာဗဟုသုတကိုမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။
1 ။Pစာပတ်ပေါင်းခြင်းsနှင့်အမှတ်အသားs။ ခဲတံသည်အမူအယာများကိုပထမဆုံးပြုလုပ်ပြီးအမှတ်အသားသည်နောက်ဆုံးမူကြမ်းကိုဆွဲဆောင်သည်ဒီဇိုင်းအရသိရသည်.
2 ။ ပါဝါ tool ကိုတူးလေ့ကျင့်s ။SOme Hollow အစိတ်အပိုင်းကိုအရင်တူးရန်လိုအပ်သည်။
3 ။ စွယ်စုံပါဝါကိရိယာများကဲ့သို့ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများ, ထွင်းထုကိရိယာများ,wire saw,အရာအပြီးသတ်ရေးဆွဲခြင်းအရမလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်တောက်လေ့ရှိသည်။
4. Mahogany ဖိုင် ကြီးကျယ်သောကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အတူ,ပစ္စည်းရှိလို့ပါအပေြာင်းအချို့သောခဲယမ်းခြင်း,ဘယ်သူပိုမိုမြင့်မားသောခဲယဉ်းသောဖိုင်တစ်ခုလိုအပ်သည်,
5S နှင့် tသူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ
2. ထူးခြားသောသမာဓိသည် ပို. ထင်ရှားသည်.
များသောအားဖြင့်ထုတ်ကုန်များ၏အဓိကထုတ်ကုန်များသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျော်ကြားသောတောအုပ်များနှင့်ထုထည်ထွင်းထုထားပြီးပြားချပ်ချပ်ဓားဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းကဲ့သို့သောထွင်းထုသည့်နည်းစနစ်များ, ပတ်ပတ်လည်ဓားဖြင့်ဓားခါးပတ်, ထွင်းထုခြင်း,နှင့်ဖွင့်လှစ်ဖွင့်လှစ်။ တစ်စီးထွင်းထုမှတဆင့် NDထိုအရာအပြည့်အဝရောင်ပြန်ဟပ်sတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုရှည်လျားသောနှင့်အတူကျယ်ပြန့်နှင့်လေးနက်။ ပေo, ငထွင်းထုပရိဘောဂအလွန်အပိုင်းအစဖြစ်အနုပညာတစ်လက်။ ဆရာပန်းပုဆရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကျမ်းချက်ကိုဖော်ပြရန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လက်ဖြင့်ထွင်းထားသောပရိဘောဂများနှင့်အမြင့်ဆုံးအစိုင်အခဲပရိဘောဂများကိုစားသုံးသူများကထွင်းထုသောအနုပညာအလှအပများကြောင့်စားသုံးသူများကစားသုံးသူများကမျက်နှာသာပေးကြသည်နှင့် tသူသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ နှင့်လက်လုပ်ပရိဘောဂများနှင့်အစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂများသည်အမှန်တကယ်ကျန်းမာသောပရိဘောဂများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ0ပတ်0န်းကျင်နှင့်ဆိုင်သောသဟဇာတဖြစ်သောပရိဘောဂဖြစ်သည်။
ပရိဘောဂသဲသည်ပရိဘောဂများ၏မျက်နှာပြင်ကိုချောမွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။ ကြမ်းကနေသဲဒဏ်ငွေရန်သဲ, 12 စက္ကူလိုအပ်သည်။ Sander တစ်ခုချင်းစီသည်အထက်လမ်းမပေါ်မှကျန်ရှိသောသဲလွန်စများကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အသုံးပြုရမည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပရိဘောဂများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးသောစက္ကူများကိုအသုံးပြုရမည်။ ပွတ်မျက်နှာပြင်အလွန်ချောမွေ့သည်။ ၎င်းသည်လက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်လုပ်ပရိဘောဂများအတွက်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အလိုတော်အီးကြောင်းပြောနိုင်ပါတယ်သူ 12-Pass Sanding ဖြစ်စဉ်ကို ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစား 12 မျိုးနှင့်အတူပရိဘောဂသဲကိုသဲကန္တာရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကွဲပြားခြားနားသောမျိုး 12 မျိုးသည်ပရိဘောဂအရောင်ခြယ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စက္ကူပုံသဏ္ model ာန်ပုံစံ 120 မှ 600 တန်ပုံစံများကို အသုံးပြု. ပရိဘောဂများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စက္ကူ 1500 ~ 2500 မော်ဒယ်လ် 1500 ကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည်။ ပရိဘောဂတွေကိုပိုပြီးချစ်စရာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပါ။ထိုမှျဒီအဆင့်ကိုလည်းရေအရောင်ဖျော့ဖျော့လည်းခေါ်သည်။ အရာဝတ္ထု၏ထောင့်များနှင့်ထောင့်များကိုအရောင်များကိုပွတ်သပ်သောအခါသင့်လျော်သောစွမ်းအားကိုအသုံးပြုရမည်, လှုပ်ရှားမှုသည်အလင်းဖြစ်ရမည်။ မူလပတ်0န်းကျင်သို့မဟုတ်စတုရန်းအောက်လိုင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
ကွဲပြားခြားနားသောသစ်သားကိရိယာများ Power Hand Sander ပါဝါကြိတ်ကိရိယာများ ပါဝါ Rotary ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများ လေ့ကျင့်ခန်း -bits နှင့်အတူပါဝါ tool ကို စွယ်စုံပါဝါကိရိယာများ ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများ လက်ထွင်းထုကိရိယာများ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ